Dora - Embindini wedolophu endala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRaško
Igumbi elihle nelipholileyo kumbindi wedolophu yakudala, kuphela i-200 m ukusuka kunxweme lwedolophu kunye neekhilomitha ezi-4 ukusuka kwidolophu yaseKoper. Iphelele kwizibini kunye neentsapho ezincinci. Izinyuko ezimbalwa ukusuka eManzioli square, Church of St. Mary, Parenza museum kunye neIsola-Izola lighthouse.
Indlu iDora ukuba ihlaziywe ngokupheleleyo kulo nyaka, kwaye inazo zonke izinto ozidingayo kwiiholide ezimfutshane: Isofa enokuthi iguqulelwe ngokulula ibe yimbi kubini, ibalcony encinci yabathandi bekofu, ikhitshi elikhulu kunye nezixhobo zabo bonke abachwephesha, igumbi lokuhlambela. ufuna ukuhlala kunye negumbi lokulala ...
4.52 ·Izimvo eziyi-57
4.52 out of 5 stars from 57 reviews
4.52 · Izimvo eziyi-57
Yindawo eqhelekileyo yaseMedithera eneendawo ezininzi zokuphumla kunye nemivalo ekufutshane, iimitha nje ezingama-50 ukusuka eMarina Izola, imarike yeentlanzi yasekhaya, igrosari kunye neemitha ezili-100 ukusuka elunxwemeni! Kuni nonke enithanda uhambo olude lwaselunxwemeni, ukukhwela ibhayisekile, ukuqubha kunye nokuhlola.
Umbuki zindwendwe ngu- Raško
Ndifumaneka kwi-imeyile: rasko.rastoder@gmail.com
ifowuni: +386 40 504 752